Guqula oonobumba abakhulu ushiye oonobumba abancinci ngeMicrosoft Word kunye nenye into- iGeofumadas
Matshi, 2010 Ezahlukeneyo
I-2007 kunye nebhebhoni yayo, njenge-AutoCAD Wasishiya izinto ezithile ngaphandle kokulawula ngexesha esizikhawulezayo.
Ndijonge ukuguqula isicatshulwa ukusuka kumanqaku amancinci ashiye oonobumba abakhulu, ababekade benqakraza kube kanye kwimenyu. Andazi ukuba iphi, kwaye ukuba ikho khange ndibenomonde owoneleyo, ndiye ndaqala ukuzama ukudityaniswa kwezitshixo, ishifti, ctrl, alt, kunye nemisebenzi F2, F4, njl.
Ekugqibeleni (ngokukhawuleza) bandifaka ukuba yiShift + F3.
Isicatshulwa sikhethiweyo, ke iShift + F3, kwaye kwimeko yokuqala kuphela iileta zokuqala zetekisi ziboniswa kwiibhokisi ezikhulu:
Ukuba iphinda isetyenziswe kwakhona, iShift + F3 iba yinto yonke:
Ngaphandle bengazi into isitshixo, mna isebenze abanye abalinganiswa engaqhelekanga bracketed imifanekiso, iihayiphalinki, esemazantsi, ngqindilili ... akukho nto efanayo, ziziswa kuphela ukuba sikhumbule oko wakwenzayo screen blue ngeLizwi Egqibeleleyo.
Oku kwenzeka ngenxa yokuba iikhowudi zentsimi zenziwe. Kufuneka ubone ukubandezeleka ndaya kuzo, kuba ndifuna ngakumbi, kuko konke ukwazi kwam geofumar sublime mna ndakhangela akunakwenzeka kude kube uxhulumaniso Internet.
Ukuyisebenzisa okanye ukuyikhubaza, isetyenziswe Alt + F9
Ukuba ufuna ukutshintsha i-ophroseksi ukuya kwi-Excel, yenziwa ngemisebenzi elandelayo:
NGAMAYUSC ukutshintshela kwimizimba
I-MINUSC idlule kwi-lowercase
I-NOMPROPIO ukuze ihlaziye incwadi yokuqala
Kucinga ukuba iseli yi-A2, ngoko:
= MAYUSC (A2) Sitshintsha itekisi kuzo zonke i-CAPITAL LETTERS (JUAN CARLOS PERDOMO)
= MINUSC (A2) Sitshintsha itekisi kuyo yonke i-lowercase (juan carlos perdomo)
= NOMPROPIO (A2) Sitshintsha itekisi kwintlobo yesicatshulwa (uJan Carlos Perdomo)
Post edlulileyo«Ngaphambilini GPS yaseBhabheli, okusemandleni ukuze isebenze data
Post Next Eyona yokungcakaza onlineOkulandelayo »
Iimpendulo ezi-7 "Guqula oonobumba abakhulu usebenzise oonobumba abancinci ngeMicrosoft Word kunye nenye into"
Siyabonga ngokubeka ii-hyperlinks kunye nemifanekiso kwi-bracket !!!, phantse unyaka odlulileyo ndababona kwibakaki yesikwere kwaye akukho ndawo bekufana nokuguqula
juan sanchez uthi:
Eyona nto, Siyabonga ngokuthumela oko kwakukunceda kakhulu.
Kwaye ... ngengozi umntu uyayazi indlela yokuhambisa umfanekiso uye kwi "Watermark"?. KwiLizwi elidlulileyo, ndikhethe ngokulula umfanekiso, ndikhethe «Ifomathi yoMfanekiso» kwaye ngokulula kwaye ngaphandle komsebenzi omninzi ndikhethe «Watermark». Hayi ngoku, ngoku kuya kufuneka "uzive ungaphandle" de ube uyifezekisile into oyifunayo. Ndiyazi ukuba kukho iisoftware zokuguqula imifanekiso, kodwa ngaphambi kokuba ndingazisebenzisi. Ndiyazi ukuba ine "Watermark", kodwa ye "Imvelaphi yephepha", ayisebenzi ngoluhlobo.
Ukuba umntu uyazi apho le sicelo ikhona, ndiyakuyixabisa.
Izibingelelo zaseCarracas, eVenezuela.
Sawubona Monica, olo khetho luya kutshintsha ukusuka kumgca we-lowercase ukuya kwi-footprint, kodwa akusiyo i-backverse, ukusuka kumgca ukuya kumgca wezantsi okanye usebenzise incwadi yokuqala yegama.
Ke mna kuphela ocinga ngokwahlukileyo, ndiya nokucebisa kwi yonke yam usithelekise, kubonakala izibonelelo ongenantandabuzo kakhulu kwaye kakhulu xa usebenzisa imisebenzi ethile, umzekelo, ukuba ngaba phezu kwetafile, wena zonke iinketho kwi toolbar ngesandla, ukuba kudlula nje izifundo kukunika ukhetho ukuze ubone yoko, ukuba wena kunye imifanekiso kakhulu, kwaye ngokunjalo nayo yonke into. Kwaye ke ingxaki comentabais capitalisation bengafumani nto bazibona njalo; ukhetha okubhaliweyo ofuna ukutshintshela womzekelo ongentla, kwaye icio menu ngaphakathi ibhokisi Umthombo, unalo fechita uyakwazi ukhankase, kuvula i window apho zonke iinketho zivela, kwaye enye yazo i-CAPITAL.
Yiyo loo nto mna, mhlobo wam endimthandayo, ndisebenzisa uLizwi 2003…. kunye ne Suite yakho yonke.
Ngokwe-MS utshintsho lwabo lwangaphambili, endikholelwa ukuba lwalubizwa ngo-2005, lwalusekwe "kwizifundo ezenziwa kwindlela yokuziphatha komsebenzisi ... blah, blah, blah."
Inyani yile yokuba "iqela ekugxilwe kulo" kwimbono yam khange likhokelele kwiziphumo ezilungileyo. Kudala ndisebenzisa isuti yeOfisi ukusukela ngama-95 kwaye ndiye ndaziqhela zonke iindlela ezimfutshane ezingatshintshi…. de ezi suites zimbini zokugqibela.
Ukukhungatheka ndibenayo xa ndifuna ukukhangela inketho kwaye ndakufumananga.
Ndiye ndayisombulula ngokulayisha i-2003 kwi-PC yam. Ewe kunjalo, ukuba kolunye udibana nomntu "ohlaziyiweyo", nokuba akunandlela, nangona ndifumene usetyenziso oluthile lokucofa ekunene olunike iziphumo.
Isiphelo: Ezi Suites zokugqibela azinabuchule njengoko becebisa kwaye bekufanele ukuba sele bezenzile izigqibo zabo. Ngapha koko…
Ndivakalelwa kukubandezeleka njengokungathi yam ;-), ndiyayithiya nayo yonke into ithatha ixesha elide kunaphambili, kwaye ngokugqithiseleyo kwaye kufinyeleleke ngakumbi